Seenaan gabaabaa J/Elemoo Qilxuu -
Seenaan gabaabaa J/Elemoo Qilxuu
bilisummaa April 18, 2014	1 Comment
Maqaan dhalootaa Hasan Ibraahim jedhama. Akka ragaan tokko tokko ibsanitti, kan dhalate bara 1936, Oromiyaa bahaa keessatti ture. Maqaa qabsoo Elemoo Qilxuu jedhamuun uummata biratti beekkama, hirmaataa warraaqsa sabboonummaa Oromoo fi hoogganaa Waraana Bilisummaa Oromiyaa(Oromia Liberation Army) ti.
Yeroon Elemoon mana hidhaa keessatti dabarse akka inni sabboonaa kutataa ta’u isa godhe. Erga mana hidhaatii baayee booda sochii sabboonumma Oromoo kan akka Waldaa Afraan Qalloo keessatti hirmaachu jalqabe. Osoo biyya jiruu, Elemoon dhoksaadhan gara Moqaadishoo deemee walga’ii sabboonummaa Oromoo irratti hirmaate. Achittis hojiin sabboonummaa Oromoo uummata biyya Arabaatti baballisun isatti kenname. Gara Edenittis deebi’ee dhaabbata hawaasa Oromoo hundeesse. Bulchiinsa magaalaa Edenis amansiisee akka isaan biiroo siyaasaa banuuf isaa eeyyaman godhe. Gargaarsa mootummoota Arabaa fi akkasumaas Dhaabbata Bilisummaa Paalestiin (Palestinian Liberation Organization) fi Adda Bilisummaa Eertiraa (Eritrean Liberation Front) irraa gaafate. Gargaarsa mootummaa Iraaqitiin, leenjii waraanaa ji’a torbaa erga kennee booda addaa riphee lolaa (guerilla force) hundeessee. Adda kanas hooggansa hiriyaa isaa Abdulkarim Hajii Ibraahim, irra caala maqaa Jarraa Abbaagaddaa jedhamuun beekkama, bobbaase. Addi kun odoo gara Itoophiyaa seenuf yaaluu mootummaa Somaaliyaatin rukutamee, booji’amee gara mana hidhaa galfame. Kunis ta’u, Elemoon odoo abdii hin kutatin meeshaa waraanaa, gargaarsa Adda Bilisummaa Eertiraatin, dhoksaadhaan karaa gammoojjii Affaar keessan gara Itoophiyaatti glachuu fi kuusuu jalqabe.
Kana booda, hiriyaa isaa Hundee Taqii wajjin, qabsoo waraanaa jalqabuuf gara Galamsoo deeman. Achittis jeneraal Taaddasaa Birruu, kan hidhaa manaa kessa ture, waajin wal argan. Elemoon dhoksaadhan humna waraana ijaaruu jalqabe. Abaan Hundee humna waraanaa riphee lolaa kana bakka iddoo Gubbaa Qorichaa jedhama Tulluu Carcar irratti akka buufatu gorsan. Caamsaa 1974, Elemoon nama digdama fudhatee Gubbaa Qorichaa irratti kaampii dhaabe. Achiihis eegdota namicha Mulaatuu Tagany jedhamuu, abbaa lafaa ummata naannoo sanaa baayyee hacuucaa ture, ajjeesuu jalqaban. Boodarras erga Mulaatun barsiisaan amantii Islaamaa Galamsoo kessatti akka ajjeeffamu ajajee booda Mulaatuu ajjeesan.
Dhumarratti humni Geetaachoo naannoo Xirrootti humna Waraana Bilisummaa Oromiyaa itti marsanii waraana geggeeffameen nama baayyee keessaa ajjeesan. Elemoonis erga harka kennatee booda gaafa loltuun isa qabuuf dhufan dhuka’aa dhoose of ajjeesee, gootummaan seenaa galmeessee darbe.
Previous Mootummaan Wayyaanee Badii Tokkoon Malee Sabboonaa Artistii Oromoo Jaafar Yusuuf Ukkaamsuu Mana Hidhaa Galche
YAA ILMAAN OROMOO HIN NUFFANIINAA YEROON AMMA,
SOCHIIN AMMA, BILISUMMAANIS DHUFAA JIRA, ENOUGH IS ENOUGH.
HUMNI OROMOO GUDDQAA DHA, DANDEETIN OROMOO TIS OLAANADHA,
KANAAFU YAADA TOKKOON ILAALCHA TOKKON FUNDURATTI YAADEMNU.
SABNI TOKKO YOO BIYYA HIN QABAANNE TA´E,KABAJAANI HIN JIRU,
NUTI GARU (OROMOON),BIYYA GUDDAA,SABA GUDDAA QABNA,GARUU
SABA NAMA TUFFATUN (JIBUN) BITAMUN OROMOO TA´E HUNDAAF HINLIQIFAMU.